Isahluko se-3194 seNdodana emangalisayo kwi-Law Novel Free Online | XperimentalHamid
Isahluko se-3194 seNdodana emangalisayo kwi-Law Novel Free Online
Juni 15, 2021 Juni 14, 2021 by Qasim Khan
funda Isahluko 3194 yenoveli Unyana omangalisayo eMthethweni by INkosi igqabi simahla kwi-Intanethi.
UPhilip wajonga unkosikazi wakhe, wothuka kancinci, kwaye akazange akwazi ukuzibamba, wathi: “Mfazi wam, jonga ngoku. Kukho inkohliso ekhethekileyo yokuba sisandula ukutshata… ”
ULenan wancuma kancinci wathi eneentloni: “Abantwana balapha, sukuthetha ububhanxa…”
Waqina wathi: “Le nto ndiyithethayo isuka emazantsi entliziyo yam!”
Njengoko watshoyo, wakhupha isipaji sakhe, kwaye emva kokuyivula, kwelona khadi lingaphandle selikhanyayo, bekukho ifoto yabo bobabini xa babesebancinci.
UFilipu wanika uMarven noSara lo mfanekiso, wathi: "Jonga, ndithetha inyani?"
UMarven wajonga ifoto. ULenan efotweni wayeneminyaka engamashumi amabini anesithandathu okanye amashumi amabini anesixhenxe ubudala. Nangona kunjalo, ngelo xesha, wahamba ngendlela eqolileyo. Nditsho neefoto ezindala zazikhangeleka zihamba kakhulu.
Ngelo xesha, wayenomdla ngakumbi kunangoku.
USara osecaleni wajonga ifoto kanina endala wathi: “Mama, wawumhle ngokusemncinci.”
"Nangona sendikhe ndayibona le foto amaxesha amaninzi, andikwazi kuyincoma ngalo lonke ixesha ndiyibona ..."
ULenan wancuma wathi: “Sukudlala i-rainbow f * rts apha. Ukuyithetha ngokuthambileyo le, lulutsha olwahamba kudala, wena ke xa sele uneminyaka yobudala ulungile. ”
Njengoko wayethetha, wakwazi ukuzibamba: “Kodwa xa ndandisemncinci, uDade Margaret wayemhle ngokwenene.”
Emva koko, wajonga uMarven wathi ngokunyanisekileyo:
“Marven, awuyazi indlela awayebalasele ngayo umama wakho esemncinci. Kwakukho intetho kwisangqa esidumileyo esixekweni esithi uChangying uzise iMargarate eMelika eOrgeyon. ”
“Ngalo mzuzu esixekweni, umtsalane wabo bonke abantu basetyhini esixekweni wacinywa ngoko nangoko…”
UMarven akazange akwazi ukuzibamba wahleka: “Malumekazi, ingaba ikhona into ebaxekileyo oyithethileyo?”
"Ewe ikhona." ULenan wathetha nzulu wathi: “Umama wakho wayese-Orgeyon ngelo xesha. Yayilucalucalulo lokunciphisa ubukhulu. ”
Inkangeleko yakhe, ubume bakhe, ubuntu bakhe, imfundo yakhe, kunye nemvelaphi yosapho konke oko bekwiklasi etyumkileyo. ”
"Ukuqala ukuvula, xa kufikwa kutyekelo, iUnited States ngokuqinisekileyo yayiliziko leemeko zehlabathi ngelo xesha, ke umama wakho wayemangalisa kakhulu kuzo zonke iinkalo zamehlo ethu."
Uye waphinda wathi: “Ngapha koko, usapho lukatatomkhulu wakho belukhula kakhulu phesheya kweminyaka, kwaye luthathwa njengentsapho enkulu endala.”
“Ababizwa ngokuba ziindwalutho eYurophu bakude kakhulu nosapho lotatomkhulu wakho. Umama wakho wayeligugu elisezandleni Zosapho. ”
"Into esiyifumeneyo yimfundo emibini yobukhosi baseMpuma naseNtshona, leyo yinto esinokuyithelekisa nayo."
Ukuthetha ngale nto, uLenan akakwazanga ukunceda kodwa wathi ngeemvakalelo:
"Ngelo xesha, nantoni na enxitywe ngumama wakho ibiza kubangela ukuba abantu abathanda u-Orgeyon batshabalale."
“Ngelo xesha, umama wakho wayengoyena mntu u-Orgeyon wesangqa sosaziwayo. Oko akunxibayo kunye nezinto aziphetheyo, abanye abalindelanga ukuba bafumane indlela yokuthenga kwakhona kwaye baxelise… ”
USara emangalisiwe wabuza: “Mama, le nto uyithethileyo iyinyani?”
"Kunjalo!" Ngokunyanisekileyo uLenan wathi: “Ngelo xesha, sasinganxibelelani nehlabathi, kwaye umsantsa wolwazi phakathi kwabemi nabangaphandle wawukhulu kakhulu.”
Ngokungafaniyo ngoku, uthungelwano lolwazi luphuculwe kakhulu, akukho lwazi lushiyekileyo ekhaya nakumazwe aphesheya.
Ethetha ngale nto, ngequbuliso wakhumbula into ethile kwaye wabuza uMarven:
"Ngapha, Marven, sowukhe wacinga ngokuya eUnited States ukudibana notatomkhulu nomakhulu wakho ?!"
Isahluko esilandelayo 3195
Iingcinga ezi-7 kwi "Isahluko 3194 soNyana oMangalisayo eMthethweni kwiNoveli yasimahla kwi-Intanethi"
Juni 16, 2021 kwi-7: 03 PM
Kapan layisha kelanjutannya lagi ???
Juni 15, 2021 kwi-8: 17 AM
Juni 15, 2021 kwi-5: 49 AM
Juni 15, 2021 kwi-2: 36 AM
Ewe, ngoku unenqwelomoya oya e-US kunye (dibana nootatomkhulu noomakhulu). Ndiyathemba ukuba apho uza kudibana nomntu oza kucela umngeni kumandla akhe. Ndicinga ukuba lo mntu uya kuvela kusapho lwaseRothschild.
Juni 14, 2021 kwi-7: 28 PM
Esoy por el cap 3194, cuando publican mas, es tremenda novela
Juni 14, 2021 kwi-7: 27 PM
Marven akukho va conocer a los abuelos maternos ni secuestrado. Allá no saben que ni siquiera existe, y si existe, akukho les interesa conocerle.
Juni 14, 2021 kwi-10: 51 AM
Enkosi Mnu admin